अनुहारमा डण्डीफोर छ ? यस्ता छन् हटाउने उपाय – Everest Dainik – News from Nepal
अनुहारमा डण्डीफोर छ ? यस्ता छन् हटाउने उपाय
भदौ ३१ । डण्डीफोर आम समस्या हो । पुरुष वा महिला किशोरावस्थामा प्रवेश गरेलगत्तै आउने डण्डीफोरले धेरैलाई सताएको हुन्छ । यसले अनुहारको सुन्दरतालाई नै ह्रास ल्यान सक्छ ।
डण्डीफोर निको भए पनि दागको रुपमा यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ । डण्डीफोरलाई चाँडो निको बनाउने धुनमा त्यसलाई निचोर्नु नै समस्या निम्त्याउनु हो । फेरि त्यसको दागलाई हटाउने नाममा प्रयोग गरिने क्रिमले छालामा साइडइफेक्ट गर्न सक्छ ।
समयमै यसबाट बच्न यी घरेलु उपायहरु नै अपनाए सुन्दर अनुहार बनाउन सकिन्छ ।